Social Media Strategy: Igodo nke iwulite usoro ihe ịga nke ọma
Imirikiti ụlọ ọrụ ndị na-abịakwute anyị maka enyemaka mgbasa ozi na-elekọta mmadụ na-ele anya na mgbasa ozi ọha na eze dị ka ọwa na-ebipụta ma na-enweta ihe, na-egbochi oke ikike ha nwere iji bulie mmata nke ikike ha, ikike ha na ntụgharị ha n'ịntanetị. Enwere ọtụtụ ihe na mgbasa ozi mmekọrịta, gụnyere ịge ndị ahịa gị na ndị asọmpi gị, ịgbasa netwọkụ gị, yana itolite ikike ndị gị na akara gị nwere n'ịntanetị. Ọ bụrụ n ’ịbelata nanị iwepụta akwụkwọ na ịtụ anya irere ebe a, e nwere ike iwe gị.
Mgbasa mgbasa ozi nwere ike ịbụ ebe egwuregwu maka ndị ahịa gị, mana ọ bụghị maka ụlọ ọrụ gị. Maka azụmahịa, mgbasa ozi mgbasa ozi kwesịrị iwere ihe ọ bụla dị mkpa dị ka atụmatụ ahịa ọ bụla ọzọ ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụ nsonaazụ. Ma ọ bụ, karịa, uru. Mgbasa Ozi MDG
a 8-Point Checklist na Social Media Marketing si Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi MDG na-enye ọtụtụ nghọta na nkọwapụta zuru ezu maka usoro mgbasa ozi mgbasa ozi mmekọrịta kwesịrị ekwesị, gụnyere:
Atụmatụ - Isi ihe ga - eme ka mmekọrịta mmadụ na ibe ya nwee ike ịzụlite ọdịnaya, usoro, nkwalite, yana atụmatụ dị iche iche nke na-eme ka ndị na-ahụ maka mgbasa ozi mmekọrịta 'ịhụnanya, nsọpụrụ na ntụkwasị obi na akara gị Otu mpaghara n'ime ngalaba a nke a na-atụlekwaghị n'ogologo bụ ịnwe atụmatụ azụmaahịa mmekọrịta ọha na eze ebe ndị otu egwuregwu gị na-etolite ma na-etinye netwọkụ ha.
Nyocha nke Social Platform - Chọpụta ebe atụmanya gị, ndị ahịa gị, na ndị asọmpi gị nọ na otu ị ga-esi jiri ike gị na adịghị ike ha mee ihe bụ akụkụ dị mkpa nke usoro mgbasa ozi mmekọrịta.
Ghọta Teknụzụ - Nghọta zuru oke nke ike nke mgbasa ozi mgbasa ozi mgbasa ozi maka ọtụtụ ebe, e-azụmahịa, ọgbọ ndu, mmetụta mgbasa ozi, ịkpọ oku, mbipụta ọha na eze, mmụba mmekọrịta mmadụ na ibe, nyocha arịrịọ, imewe mmekọrịta ọha na eze, mgbasa ozi mgbasa ozi mmekọrịta, ọdịda peeji nke njikarịcha. , ndenye aha na njikwa, yana ikike nke ndị ọrụ wepụtara (UGC).
Social ugwo Media - Facebook, LinkedIn, Twitter, Pinterest, Instagram, na Youtube-ha niile nwere usoro siri ike iji zube ma kwalite ọdịnaya gị.
Ọdịnaya Ọdịnaya - Ọdịnaya bụ nri ndị na-ege gị ntị na ndị agụụ na-agụ iri. Na-enweghị usoro dị ukwuu, ị gaghị adọrọ uche ma kesaa na mgbasa ozi mmekọrịta.
Nzaghachi ndị ahịa (Nlekọta Aha Ntanetị / ORM) - Nlekọta mmekọrịta iji jikwaa aha gị n'ịntanetị yana ịzaghachi ma meghachi omume na nkwurịta okwu nsogbu dị oke mkpa taa. Ikike gị ịzaghachi ma zaghachi ngwa ngwa na nsogbu ọrụ ndị ahịa ma ọ bụ nsogbu na-enye ndị na-azụ ahịa nkwanye ùgwù na ntụkwasị obi ị nwere ike tufuo.
Nnabata & Egwu Assessment - Usoro nyocha iji hụ na usoro iwu na-achịkwa ma mebie ihe egwu dị egwu bụ akụkụ dị mkpa nke nyiwe mgbasa ozi mmekọrịta na usoro mgbasa ozi na-aga nke ọma.
Mmesho - Ma ọ bụ mmata, itinye aka, ikike, njigide, mgbanwe, nsogbu, ma ọ bụ ahụmịhe, usoro mgbasa ozi ọ bụla ga-enwerịrị ngwa eji arụ ọrụ iji tụọ njiri mara arụmọrụ nke usoro a.
Nke a bụ nkọwa zuru ezu - gbaa mbọ hụ na ị ga - elele nke a megide usoro gị iji hụ na ị na - ewulite mmemme mgbasa ozi bara uru.
Tags: ikikeMmatanyochamgbanweahụmahụ ahịanzaghachi ndị ahịanjikọ akainfographicmdg mgbasa ozinjikwa aha njirimara na ntanetịma ọ bụakwụ ụgwọ mgbasa oziurunjigidennweta ọdịnayaọdịnaya mmadụmgbasa mgbasa ozi mgbasa ozinyocha mgbasa ozina-elekọta mmadụ media nnabatasoshal midia ọdịnayaelekọta mmadụ mgbasa ozi KPIsteknụzụ mgbasa ozi mgbasa ozimgbasa ozi mgbasa ozimgbasa ozi mgbasa ozielekọta mmadụ media akwụ ụgwọelekọta mmadụ media n'ihe ize ndụusoro mgbasa ozi ọha na ezeteknụzụ mgbasa ozi mmekọrịtanlekota oruna-elekọta mmadụ n'elu ikpo okwu oditiatụmatụỌkụahụmahụ onye ọrụ
Ọkt 1, 2011 na 3:06 PM
Enweghị ike ịsị na ekwenyeghị m. Imirikiti ụlọ ọrụ adịghị ka ha nwere usoro mgbasa ozi mmekọrịta, mana ọzọ ọtụtụ ụlọ ọrụ anaghị adị ka ha na-akpa agwa n'ụzọ ọ bụla!
Ọkt 2, 2011 na 8:26 AM
Kama ịghara ime ndị mmadụ ka ha mee Twitter ka ọ bụrụ “nke nwere nzube ma jikwaa,” M na-eji ndepụta Twitter eme ọtụtụ ihe. Ma ndepụta ndị a bụ nke Indy, metụtara ụlọ ọrụ ma ọ bụ ọbụlagodi ịlele akụkọ egwuregwu, ha emeela ka ọ nwekwuo ọ .ụ.
Ọkt 2, 2011 na 9:19 AM
Ma eleghị anya ị ga-enwerịrị isiokwu bụ, "Usoro mgbasa ozi gị na-elekọta mmadụ." O doro anya na ọ dị mma ị swearụ iyi.
Ọkt 4, 2011 na 10:11 AM
Ọkt 4, 2011 na 11:31 AM
@chuckgose ezigbo echiche banyere otu ngwa ọrụ mmekọrịta na-adị mfe ijikwa na ngwaọrụ dị ka ndepụta, mana ijighị n'aka na nke a na-edozi nsogbu ahụ. Dị ka nwere a na-elekọta mmadụ media atụmatụ na-aga na akọwapụta uru - mgbe ị na-anọchi anya a ika - ọ bụ "uru" ibe bụ ihe kwesịrị ka a ga-agbajikwa maka ndị mmadụ. Kọwa ihe nke ahụ pụtara na otu esi enwe ya na mgbe ọdịnaya nwere isi bụ ebe ọtụtụ na-atụ ụgbọ mmiri.
Ọkt 4, 2011 na 1:23 PM
Ekwenyere m kpamkpam. Anọ m na-ekwu maka @douglaskarr: isi okwu banyere mmadụ ịgbaso ndị mmadụ iji belata mkpọtụ ahụ. Enwere ọtụtụ akụkọ m na-agbaso site na itinye ha na ndepụta mana esoghị m na eze.
Nov 26, 2011 na 4:31 PM
Kwuru nke ọma. O nwere ike isi ike iguzogide mmeghachi omume ikpere iji jiri mgbasa ozi na-elekọta mmadụ na-ere, na-ere, na-ere, mana ọ na-abụkarị azụ ahịa mgbe niile! Ekwenyere m na @chuckgose: disqus banyere ịmepụta ndepụta Twitter iji belata mkpọtụ ahụ. N'ụzọ ahụ, ị ​​nwere ike ịgbaso ndị niile masịrị gị (#smb info, akụkọ ụwa, ozi horoscope, ị na-akpọ ya!) Ma nwee ike idobe ya na njikwa. Daalụ maka ndụmọdụ Doug!